चढ्ने होईन त् उड्ने बाईक? यस्तो मुल्यमा सुरु भयो अग्रिम बुकिङ ! - Damak No.1 Online Patrika
प्रकाशित मिति : सोमवार, कार्तिक २६, २०७५
एजेन्सी । प्लेन, हेलिकाेप्टर पछि अब उडने बाईक बनेको छ । रसियन टेक कम्पनी ‘होभरसर्फ’ ले यस्तो बाइक बनाएकाे हो । कम्पनीले बाईकको अग्रिम बुकिङ समेत थालेको छ।
कम्पनीले ‘होबरबाइक एसथ्री २०१९’ मोडलको प्रिअर्डर सुरु गरेको हो । अधिकतम् गति ९६ किलोमिटर प्रति घन्टा गति रहेको यो बाईक जमिनको सतहबाट ५ मिटर उचाईसम्म यसले उडान भर्न सक्छ ।
कम्पनीका अनुसार यो उड्ने मोटरसाइकलको मूल्य डेढ लाख अमेरिकी डलर पर्न जान्छ । आधा घन्टा भन्दा कम समय मात्र यसको उडने क्षमता छ । थोरै समयका लागि उडान भर्ने क्षमता रहेको यो बाइक मानिसका लागि भने ‘खतरनाक’ भएको विज्ञहरुको दाबि छ ।
दुबई प्रहरी बलले यो क्राप्टको प्रयोग गर्ने योजना बनाई सकेको छ । उसले यसका लागि प्रशिक्षण पनि सुरु गरिसकेको छ । ‘स्कर्पियन होभरबाइक’ नामले समेत परिचित यो बाइक दुबई प्रहरी बलले खरिद गरी परीक्षण समेत गरिसकेको छ । उसले परिक्षण उडानका क्रममा देखिएको कमजोरीहरु हटाउन सुझाव पनि कम्पनीलाई दिइसकेको छ।